‘दा भिन्सि कोड्स’को रहस्य खुल्यो, चर्चित चित्र मोनालिसाको रहस्य ‘एलियन’! - IAUA
‘दा भिन्सि कोड्स’को रहस्य खुल्यो, चर्चित चित्र मोनालिसाको रहस्य ‘एलियन’!
ramkrishna November 9, 2017	‘दा भिन्सि कोड्स’को रहस्य खुल्योचर्चित चित्र मोनालिसाको रहस्य 'एलियन'!
इटालीका विश्वविख्यात चित्रकार लियोनार्दो दा भिन्सिका हरेक चित्रहरु रहस्यमय मानिन्छन् । उनले आफ्ना सबै चित्रहरु षडयन्त्रकारी सिद्धान्त (कन्स्पेरेन्सी थ्यौरी)मा रहेर कोरेका छन् । हरेक चित्रमा फरक–फरक कोड लुकाउने ‘दा भिन्सि कोड’अनुसार नयाँ तथ्य पत्ता लागेको छ ।
Previous Previous post: सबैभन्दा महंगो कफी ‘कोपि लुवर्क’, बिरालोको दिसाबाट बनाइन्छ !
Next Next post: जहाज चढ्नुअघि यात्रुको वजन नापिने, कारण यस्तो छ